Malunga nathi -Shenzhen Spocket Technology Co., Ltd.
I-Shenzhen Spocket Technology Co., Ltd. ine-brand SpocketGuard njengomthumeli omkhulu wenkqubo yokubonisa ekrelekrele, izixhobo zokulwa ubusela / iimveliso kunye nezixhobo ezinxulumene noko e-Shenzhen, China ukusukela ngo-2008, obonelela ngobume bokubonisa ubusela kunye nabanini beentaba zePOS, ifowuni ephathekayo , i-PC yetafile, njl., imisila yenkomo ebuyiselwayo, imisila yentsimbi, intambo zentsimbi, iintambo zokhuseleko / iintambo, imitya yeproteki, izitshixo zokhuselo, iithegi zesinyithi njalo njalo ukuthintela ukuwa, ukuwa kunye nokulahleka xa kufuneka umboniso okanye uqhagamshelo. Sinikezela ngesisombululo esibanzi seemveliso kunye nezixhobo eziyilelwe ukusombulula iimfuno zakho zokhuseleko.
Ukuzinikezela kulawulo olungqongqo lomgangatho kunye nokubonelela ngenkonzo yabathengi, iqela lethu elinamava lokuthengisa lihlala likho ukuze lisebenze nawe ukuze uqonde iimfuno zakho, unike izimvo, iingcebiso zobuchwephesha bokuqinisekisa ukuba ufumana esona sisombululo sisiso kwisicelo sakho.
"Umgangatho oPhezulu, ukuTyala okokuqala, uMthengi kuqala" ngowona mgaqo wethu ubalulekileyo, samkela ngokunyanisekileyo wonke umthengi ukuba asitsalele umnxeba ngefowuni okanye ngeposi evela kwihlabathi liphela. Sijonge phambili kwintsebenziswano eyimpumelelo kunye nawe!
Amanqaku aKhethekileyo: Udade wethu inkampani yokuthumela ngaphandle iminyaka eyi-12 +. IGreenlife Industrial Limited.
I-SPOCKET izisa italente ephezulu yobuchwephesha kunye netekhnoloji kunye kwiqela elinobuchule. Iqela lethu liquka iqela lolawulo, imveliso dept, yokuthengisa dept, R & D dept, QC dept, emva-kwentengiso inkonzo dept kunye dept zemali, njengoko ukwanda ishishini lethu, samkela abahlobo abaninzi abavela kulo lonke ihlabathi.
Ukubonisana ngaphambi kwentengiso simahla / amaxabiso aphantsi okuMakisha
I-SPOCKET inikezela ngeyure ezili-12 ukuphendula kwangaphambi kokuthengisa kunye nokubonisana simahla. Naluphi na uhlobo lwenkxaso yobugcisa luyafumaneka kubathengi bethu.
Isampulu yamaxabiso asezantsi Ukwenza kunye noVavanyo luyafumaneka. Singanikezela ngesampulu yesitokhwe simahla, kodwa imithwalo ifikelela kubathengi. Into enexabiso eliphezulu okanye isampuli elungiselelwe wena iya kucela intlawulo yesampulu ngokwesicelo esahlukileyo.
Ukuhanjiswa kweentsuku ezi-3 ukuya ku-10 ngokukhawuleza
Nje ukuba isandla sakho se-odolo siye kuthi, siya kwenza konke okusemandleni ethu ukwenza ukuhambisa ngokukhawuleza kubo bonke abathengi. Esinye isitokhwe okanye into ekulungeleyo, sinikezela ngeentsuku ezingama-3-5 zokuhanjiswa ngokukhawuleza. Kwisivumelwano esenziwe ngokwezifiso, siya kunika ingqalelo enkulu kwimfuno yakho kwaye sivelise isivumelwano sakho ngexesha lokuqala.
Ulawulo loMgangatho olungqongqo lweMveliso
Ulawulo lwempahla eluhlaza: Kwindawo yethu yokuloba, baninzi abavelisi bempahla eluhlaza kwaye sihlala sinolwalamano oluhle nabo, sinentengo enkulu kunye nokuzinzileyo yokuthenga kubo kwaye baqinisekisa ukubonelela ngezinto ezisemgangathweni kuthi. Bacwangcisela umntu onoxanduva kuphela kwimveliso yempahla kunye nokuhanjiswa kwayo ukuqinisekisa umgangatho okhuselekileyo.
Ulawulo lwemeko: Iziko lethu le-R & D lixhotyiswe ngoomatshini bokuvavanya phambili, abasebenzi bezobuchwephesha abanobuchule njenge-QC kumasifundisane kunye ne-QC ekupakisheni indawo yokwenza iseti epheleleyo yenkqubo yolawulo kunye nenkqubo yolawulo lomgangatho engqongqo, eqinisekisa umgangatho ophezulu weemveliso zethu zokhuseleko.
Iiyure ezingama-24 zenkonzo yokuThengisa emva
Kwimfuno zabathengi, siyaqinisekisa ukuba iiyure ezingama-24 ziphendula ixesha nasemva kwentengiso yenkxaso yobugcisa.
Ukuba nawuphi na umthengi wenza izikhalazo ngemveliso okanye ngenkonzo, siya kuyithumela kwiqela lethu lenkonzo. Baya kunika ingxelo ngqo kumphathi wethu wentengiso. Ngokwesiqhelo siya kubamba intlanganiso nemveliso yokuthenga, yokuthenga kunye nokupakisha zingaphelanga iiyure ezingama-24, kwaye siya kuphendula kwiiyure ezingama-48 ngempendulo kunye nesisombululo.
Ngolwazi oluthe kratya, nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nathi! Siyayamkela imibuzo yakho kwi-imeyile yethu: info@spocketguard.com, kwaye ujonge phambili ekusebenzisaneni nawe.
Idilesi: 322, i-A2 Complex Building, i-Guangqian Vil, i-Nanshan Dist, i-Shenzhen, i-Guangdong, i-518055, i-China
Umnxeba wehlabathi jikelele: 0086-18123644002
Iiyure zeOfisi: Mvulo-Lwesihlanu 9: 00-18: 00
Ukulungele ukukukhonza iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezi-6 ngeveki.
UKULUNGELE UKUYALELA? Nxibelelana nathi ngoku!